Partner Competition - JP Markets
Izimakethe ze-JP ziphathelene nokusiza abanye ukufeza amaphupho abo. Ngenxa yalesi sizathu, siqalise umncintiswano wethu wokuqala kubo bonke abalingani kanye ne-IB. Cabanga uma ngabe unethuba lokuba nesiteji sakho se-branded MT4 kanye nelayisense ye-FSB lapho ungaqala khona umthengisi wakho we-forex ukuthi sizokusiza futhi sikubonise ukuthi ungayenza kanjani nelayisensi yakho ye-FSB.
Yebo, isikhathi silapha. Sinewomncintiswano lapho i-IB ye-3 ephumelele kakhulu kunazo zonke zezinyanga ezingu-4 ezizayo izothola ipulatifomu yabo ye-MT4 kanye nelayisensi yabo ye-FSB. Sizokusiza ukuthi uthole ilayisensi ye-FSB futhi ube yi-FSP elayisensi ukuze nawe uqalise ukuthengiswa kwakho kwangaphambili. Uzobe uthola isakhiwo sethu semakethe esiholela emakethe kanye nokuhweba kodwa manje nawe unethuba lokuqala udoti wakho ngokusizwa ngamaMakethe we-JP.
Sizoba nebhodi lomholi eliphilayo elikhombisa ukuthi yiziphi i-IB eziholayo. Akudingeki ukuba ube nesikole kodwa noma ubani onentshisekelo yokuba nomthengisi we-forex angangena.
Xhumana nathi ku +27 (0) 10 590 1250. Ake sikusize ufeze amaphupho akho nezifiso zakho futhi ushintshe imboni ye-forex ndawonye e-SA eyodwa yokuhweba ngesikhathi esisodwa. Amazwana ukuthi yisiphi isikole, umqeqeshi, umqeqeshi noma umhwebi ocabanga ukuthi uzowina. Ukufaka, chofoza inkinobho ngezansi.
Vula i-akhawunti ubenguzakwethu
1.) Ukuncintisana kugijima isikhathi esingangezinyanga ezine
2.) Amaklayenti abhekiselwe kuwo asekelwe kuma-akhawunti abukhoma asekelwe
3.) Imiklomelo isekelwe kumanani amaningi athengiswayo. Amakhasimende kuphela abathengise ku-akhawunti azo azocatshangelwa.
4.) Ukwethulwa kwabathengi bazoqhubeka behola ikhomishini
5.) Ukwethulwa kwabathengi bangasebenzisa izakhiwo zethu ngezinhloso zokuqeqesha.
6.) Iningi lamakhasimende aphile futhi asebenzayo azocatshangelwa. Umsebenzi wokuhweba njalo
7.) Imiklomelo izoba yi-branded MT 4 Platform yenkampani yabo
8.) Ivolumu ephezulu kakhulu ye-IB 2 ye-IB ephezulu ye-IB izobe isekelwe kuvolumu / iklayenti eliphakeme kakhulu
9.) Abanqobile bazobe behambisana nezinqubo ezifanelekayo ngokuhambisana nezidingo nemithetho ye-FSB.
Ukulinganisa okungalungile ukuvikelwa
Ngokusetshenziswa kokuqapha okuzenzakalelayo kokuthengiselana kanye nokulawulwa kwezinhlekelele, i-akhawunti yomthengi ngeke ivumeleke ukufinyelela ibhalansi engalungile.
Amathuluzi wokuthengisa wamahhala
NjengamaMakethi we-JP Oxhumana nabo ungakwazi kalula ukulanda izinhlobo ezihlukahlukene zamabhandi nezinye izinto ezihlukene ngobukhulu obuhlukahlukene. Amathuluzi atholakala ngezilimi ezahlukene.
AmaMakethe we-JP anikezela ngokugcwele obala namathuluzi wokubika okuthuthukile ukusiza abalingani bethu ukulandelela ithrafikhi yabo nokuthengisa. Ukufinyelela kuzibalo ezigcwele.
Izinkokhelo ezinokwethenjelwa ezenziwa ngenyanga: Moneybookers (Skrill), Ukudluliswa kweBhanki / ye-Wire noma ku-akhawunti yakho yokubambisana.
Isexwayiso Sengozi: Ukuhweba kwimikhiqizo ye-margin kuhilela izinga eliphakeme leengozi.